I-china ingenisiweyo engenantloko yokucinezela iscrew mveliso kunye nabenzi | IShuangyang
1.5 self kusombiwa iqhosha lemenyu
Isikulufa sokucinezelwa okungenantloko
Igama lemveliso: .42.4 Isikulufa sokucinezelwa okungenantloko
Izinto: Ingxubevange yeTitanium
• Ifumaneka ngobude obude kunye nobude bentsimbi yokunyanga uluhlu olubanzi lweempawu.
• I-2.4mm Screws Screws engenazo iintloko yenzelwe ukulungisa iziqhekeza ze-intra-articular kunye ne-extra-articular fractional kunye nokudibana kwamathambo amancinci kunye namaqhekeza amathambo amancinci; ii-arthrode zamalungu amancinci; i-bunionectomies kunye ne-osteotomies, kubandakanya i-scaphoid kunye namanye amathambo e-carpal, i-metacarpals, i-tarsals, i-metatarsals, i-patella, i-ulnar styloid, i-capitellum, intloko ye-radial kunye ne-radial styloid.
Iimpawu kunye nezibonelelo:
• Khetha kwamanye amazwe unyango titanium ingxubevange bar, ukufikelela kobulukhuni phezulu kunye bhetyebhetye
• Udidi lwehlabathi lweSwitzerland CNC oluzenzekelayo oluzenzekelayo lokusika umatshini, ukubumba umatshini ngexesha elinye
• Screw umphezulu wamkela itekhnoloji ekhethekileyo ye-anodizing, inokuphucula ukomelela komphezulu wokuqina kunye nokuxhathisa okungafunekiyo
.90.9 Inaliti efakelweyo
Bit1.7 Ityhubhu yonyango engafunekiyo
I-SW1.5 Iscrewdriver esine-hexagon esingafakwanga
Igama lemveliso: .72.7 Isikulufa sokucinezelwa okungenantloko
Ifumaneka ngobude obude kunye nobude bentsimbi yokunyanga uluhlu olubanzi lweempawu.
.91.9 Ityhubhu yonyango engafunekiyo
Igama lemveliso: .03.0 Isikhonkwane esingasetyenziswanga esiyiNtloko
I-3.0 * 16mm
I-3.0 * 18mm
I-3.0 * 24mm
I-3.0 * 30mm
I-3.0 * 34mm
• I-3.0mm Izikrweqe zokucinezela ezingenantloko zenzelwe ukulungiswa kwe-intra-articular kunye ne-extra-articular fractures kunye nokudibana kwamathambo amancinci kunye namaqhekeza amathambo amancinci; ii-arthrode zamalungu amancinci; i-bunionectomies kunye ne-osteotomies, kubandakanya i-scaphoid kunye namanye amathambo e-carpal, i-metacarpals, i-tarsals, i-metatarsals, i-patella, i-ulnar styloid, i-capitellum, intloko ye-radial kunye ne-radial styloid.
.11.1 Inaliti efakelweyo
Bit2.1 Ithuba lokugrumba lonyango
I-screw2 ye-hexagon ye-hexagon engenakubalwa
Igama lemveliso: .53.5 Isikulufa sokucinezelwa okungenantloko
• Izikrufu ze-3.5mm ezingenantloko zenzelwe ukulungisa iziqhekeza zangaphakathi kunye nezinto ezongezelelekileyo kunye nokudibana kwamathambo amancinci kunye namaqhekeza amathambo amancinci; ii-arthrode zamalungu amancinci; i-bunionectomies kunye ne-osteotomies, kubandakanya i-scaphoid kunye namanye amathambo e-carpal, i-metacarpals, i-tarsals, i-metatarsals, i-patella, i-ulnar styloid, i-capitellum, intloko ye-radial kunye ne-radial styloid.
.52.5 Ithuba lokugrumba lonyango
Igama lemveliso: .04.0 Isikhuseli esingenasihloko sokucinezelwa kweNtloko
I-4.0 * 20mm
I-4.0 * 22mm
I-4.0 * 24mm
I-4.0 * 26mm
I-4.0 * 28mm
I-4.0 * 30mm
I-4.0 * 32mm
I-4.0 * 34mm
I-4.0 * 38mm
I-4.0 * 40mm
I-4.0 * 42mm
I-4.0 * 44mm
I-4.0 * 46mm
I-4.0 * 48mm
I-4.0 * 50mm
.51.5 Inaliti efakelweyo
Bit2.7 Ithuba lokugrumba lonyango
I-SW2.5 Iscrewdriver esine-hexagon esingafakwanga
Inkqubo ye-Screw Screw yenzelwe ukulungiswa kweefractures, i-fusions, kunye ne-osteotomies yamathambo amakhulu namancinci kwaye inezixhobo ze-screws kunye ne-washer.
Olona ncedo luphambili lwezikulufu ezingenanto kukuba zinokufakwa ngaphezulu kocingo lwesikhokelo okanye isikhonkwane esikhokelayo. Ubungakanani bepini yesikhombisi buncinci kunesikere esitshixwayo kwaye sinokufakwa ngokuchanekileyo kusetyenziswa ifluoroscopy kwigumbi lokusebenza. Ukongeza, unikezwe ubukhulu bayo obuncinci, isikhonkwane esikhokelayo sinokuphinda sifakwe amaxesha amaninzi ukuba kukho imfuneko yokubekwa ngokuchanekileyo ngaphandle komonakalo ogqithisileyo kwithambo.
Ngobubanzi obuqala ukusuka ku--2.4 ukuya ku -7.3, izikrufu ezingenanto zigubungela uluhlu olubanzi lwezikhombisi kwaye zongeza intuthuzelo kugqirha ngobude obahlukeneyo bemisonto omvumela ukuba akhethe isikroba esifanelekileyo sokwaphuka okunikiweyo.
Zonke izikere zenzelwe ukuba zisetyenziselwe ngaphezulu kocingo lwesikhokelo. Isikere ngasinye sisahlulwe ngokupheleleyo okanye sigqitywe ngokupheleleyo kusetyenziswa ifom yezinyo ezinokurhoxiswa. Izikulufu zethambo ezingenanto zisetyenziswa rhoqo kwi-pelvis, i-hip, idolo, i-ankle kunye neenyawo. Ukuqhekeka kwentamo yomfazi, ukuphazamiseka ngokudibeneyo kwe-sacroiliac, ithafa le-tibial kunye ne-femoral intercondylar fractures, i-calcaneal fractures, i-talar fractures, i-ankle arthrodesis, i-subtalar arthrodesis, ukwaphuka kwe-distal femur, kunye ne-humeral, isicelo se-olecranon.
Izikrufu zityunjelwe ukuba zisetyenziselwe ngaphezulu kwewayini yesikhokelo kwaye isikrufu ngasinye sinenxalenye okanye sigqitywe ngokupheleleyo kusetyenziswa ifom yentsimbi. Ukutsalwa kwenzelwe ukufakelwa kancinci ngaphakathi. Izikere ezifakwe kwinxalenye ethile zisenokusetyenziselwa ukubekelela kwelinye iqhekeza lamathambo, apho iqhekeza lethambo elikude lifakwa yimisonto yesikere lize litsalwe kwisiqwengana secortex ecaleni kwentloko yesikere. Izikulufu ezifakwe ngokupheleleyo zenzelwe ukuba zisetyenziselwe ukuzinzisa ukwaphuka ngaphandle kokucinezelwa kukophuka.
Ixabiso elonyukayo lokhathalelo lwempilo kunye neenkqubo zokuhlawula ezihamba kunye nazo zikhokelela kukhetho lweendleko eziphantsi ezinje ngezikulufu ezingenayo. Kwizaphuka ezingafuduswanga, izikere zinokunika iziphumo zeklinikhi ezilingana neendleko eziphezulu.
Yenzelwe ukunciphisa ukucaphuka kwezicubu ezithambileyo xa kuthelekiswa neentloko zeentloko.
Isikrufu sokuzibamba senzelwe ukuququzelela ukufakwa kwesikrufu kwaye sinokuphelisa isidingo sokucofa kwezinye iimeko.
Egqithileyo Iscrew esinezixhobo
Okulandelayo: Iscrew esixineneyo
Isikrini sokuvala i-Orthopedic
Isixhobo seTitanium sokuTshixa iBone
Isixhobo sokutshixa iTrauma
Iindidi zokuTshixa iBone Screw
Iplate yokuVala i-Multi-axial Proximal Femur
Multi-yezihlunu Medial Tibia Plateau uvala Plate -...
Icwecwe lokuTshixa iVolar Dorsal
I-4.0 Series Plate eValiweyo yokuTshixa
3.0 3.5 4.5 Isikali Screw
I-Multi-axial Medial Tibia Plateau yokutshixa iPlate